Hetauda Khabar - विचार/ब्लग
सरकारले आजबाट सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबै भन्दा पहिले संचार माध्यमबाट सुरुवात गर्नका लागि आग्रह गर्दछु । अहिलेको अबस्थामा अधिकांश संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरु ३० बर्ष सम्म एउटै संचार माध्यममा काम गर्दा पनि जागिर छोडेको दिनमा रित्तोहात घर फर्कन बाध्यछन् । उनिहरुको लागि कुनैपनि ब्याबस्था छैन ।...
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठको सरुवा भएको छ । एसपी श्रेष्ठ मकवानपुर आएको ४१ दिनमै उनको सरुवा भएको हो । श्रेष्ठ को प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाण्डौमा अपराध अनुसन्धान ब्युरोमा सरुवा भएको हो । उहाको ठाउँमा बुद्धिराज गुरुङ आउने बताइएको छ । त्यस्तै डिएसपी दिलिपराज झाको पनि...
अनुप पौडेल-: बैंकमा पुँजी अभाव किन ? नयाँ सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । आर्थिक उन्नती बैंकमा पुँजी अभाव हुने पनि दुई कारण छन् । चक्रिय प्रभाव र वित्तिय संस्थाको चलाखी, चक्रिय प्रभावका कारण ब्याजदर कम भएको बेला डिपोजिट पनि कम हुन्छ, डिपोजिट कम भएको बेला लगानी कम हुन्छ । लगानी कम भयो भने ब्याजदर बढ्न थाल्छ । ब्याजदर बढेपछि फेरि...
राजु शास्वत लामिछाने, हेटौंडा नेपाली राजनितीका एक युगपुरुष डा.भट्टराई र नयाँ शक्ति प्रती अगाध विस्वास,प्रेम,स्नेह,सम्मान हुदाहुदै पनि आज पटक्कै चित्त नबुझेर केहि कुराहरु लेख्न मन लाग्यो।उमेरले डा भट्टराई 63 बर्षको मध्यान्तरतिर हिड्दै हुनुहुन्छ । उहिले आफ्नो सम्पुर्ण जिबननै देश र समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिमा सकृय भएर बिताउनु...
राजन रुचाल, काठमाडौं गोरखाका राजा पृथ्वी नारायण शाह मकवानपुर जाँदै थिए । चन्द्रागिरीबाट देखे रमणिय उपत्यका । र त्यसलाई आफ्नो बनाउने इच्छा बनाए । तयारी गरे । केहि वर्षपछि काठमान्डु उपत्यका बिजयी मात्र गरेनन्, समग्र देशको एकिकरण समेत गरे । उ बेला झैं चन्द्रागिरी डाँडाबाट काठमान्डु उपत्यका रमणिय देखिन्न । दूई सय ५० वर्ष अगाडीको...
पाँचथरदेखि धरान सम्मको यात्रा थियो । बाटोको दुरी पाँच घण्टा बिर्तामोडदेखि उता ३ घण्टा प्राइभेट गाडिमा जाने हो भने त त्यत्रो नलाग्ला सात घण्टामा पुगिन्छ तर सार्बजनिक यातायातमा प्राइभेट जस्तो कहाँ हुन्छ र ? आजभोलि फिदिमबाट लाग्ने गाडि जतिबेलै पनि पाउँछ । बिहानै उठेर हिड्न त मन थियो तर केही रेडियोको जरुरी काम सक्नु थियो तसर्थ १० बजे खाना...
हेटौडा खबर,मङ्सिर २२ / ♦टिकाराम यात्री ♦ विकासशील र अविकसित देशको विकास एवं आधुनिकताको पूर्वसर्त पश्चिमीकरण हो ? पश्चिमीकरण नमान्नु या दुत्कार्नु आधुनिकतालाई अस्वीकार गर्नु हो ? यी र यस्ता प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर नखोजेसम्म हाम्रो समाज आधुनिक हुने लालसामा पश्चिमीकरणको दलदलमा झन् तीव्र गतिमा भासिने निश्चित छ । उन्नाईसौं र बीसौं...
राज्यले नागरिकताबाट सदस्यता प्रदान गर्दछ । नागरिकले पनि राज्यबाट संरक्षणको दायित्व प्राप्त गर्दछ । नागरिकता राज्य र नागरिक बिचको सम्झौता हो । यसले शासन प्रकृयामा भाग लिने अधिकार प्रदान गर्छ र राज्य शक्तिको मार्ग प्रसस्त गर्छ । त्यस्तै भूगोलको सीमाभित्र बस्न पाउने वैद्यता पनि यसले प्रदान गर्दछ । अमेरिकि अनुसन्धानकर्ता फेहरिक गेजका...
हामी महिला जिउदो छंदा नि कोटा, मरे पछी श्राद्ध गर्न पनि कोटा !!
आमा आजबाट सोहृ श्राद्ध सकिएको हो ? मेरो प्रश्नमा आमाले टाउको हल्लाउदै जवाफ दिनुभो, “हो” । अनि हाम्रो घरमा त श्राद्ध सकिएको छैन त ? मेरो प्रश्न सुनेर आमाले छक्क पर्दै प्रति प्रश्न गर्नुभयो, “हैन के भन्छे यो, सबैको घरमा सक्किएको श्राद्ध हाम्रो घरमा चै कसरी सकिएन ?” आमाको जवाफ भनौं कि प्रश्न, मलाई चित्त बुझेन । र फेरी आमा तिर प्रश्न...
अमेरिकामा चिनेजानेकैबाट ठगिन्छन् नेपाली
तपाईंको बैंक एकाउन्टमा शकांस्पद गतिविधि देखिएकाले हाललाई सस्पेन्ड गरिएको छ, कृपया तपाईंको परिचय खुल्ने पत्रसहित बैंकमा उपस्थित हुनुहोला ।’ एकाबिहानै फोनमार्फत आएको यो जानकारीसँगै निद्रामै भएका टेक्सास निवासी प्रवेश झसंग भए । हतारहतार बैंकको मोबाइल एप्समा गएर हेरे, त्यसपछि त उनी झनै अचम्ममा परे । आफ्नो बैंकको चेकिङ खातामा रहेको...